About us - Xiamen Frand Intelligent Izinsiza kusebenza Co., Ltd.
Singabantu othomathikhi imishini yezimboni uchwepheshe oqhuba ifektri emibili eminyakeni eyishumi. Amagunya obunikazi angaphezu kuka-60 obuchwepheshe.
IXIAMEN FRAND INTENGISELO YOKUPHAKATHI CO., LTD etholakala Esitezi Sesithathu, No. 130 Isakhiwo Jiapin Indutrial Park, eGuan Kou Zhong Road, esifundeni saseJimei, eXiamen Fujian, eChina.Sekuyimboni iminyaka engu-15. Kuyibhizinisi lesimanje lesayensi nezobuchwepheshe elikhethekile ocwaningweni olwenziwe ngezifiso nasekuthuthukisweni kwamasethi wemishini esezingeni eliphezulu ehlakaniphile, okuhlanganisiwe kwemboni ezishintshayo nokusetshenziswa kwezinhlelo zamarobhothi ezimbonini. Njengamanje, inezinsiza ezine zokukhiqiza ze-R & D namalungelo obunikazi angaphezu kwama-60.Inkampani yethu ikakhulukazi ihlanganisa izinkambu ezinhlanu ezinkulu zamandla amasha, izingxenye zezimoto, i-elektroniki ngokunemba, imboni yehardware kanye nokukhiya, kanye nohlelo lwefekthri oluhlakaniphile. Imishini ithunyelwe eJalimane, e-United States, eJapane, eThailand, e-India, njll.
I-FRAND INTO YOKUSEBENZA igxile ekucwaningeni okwenziwe ngokwezifiso nasekuthuthukisweni kwemishini ephelele ehlakaniphile, okuhlanganisiwe kwefektri ezenzakalelayo nokusetshenziswa kwezinhlelo zamarobhothi ezimboni. Inezisekelo ezine zokukhiqiza zocwaningo nezentuthuko kanye namalungelo obunikazi angaphezu kwama-60. Khethekile ngokuklama / ukwenza ukuhlolwa ngokunemba nemishini yomhlangano - usebenzisa isilawuli sokunyakaza esihlakaniphile, umbono nama-robotics. Singomunye wabahlinzeki abaphezulu bezinto zokusebenza ezishintshayo nezixazululo zohlelo lokuzenzakalelayo eChina.Equipment izigaba: 1.Hose ngocingo ezishintshayo umshini 2.Buzzer inhlangano umshini 3.Carbureter inhlangano nomshini wokuhlola.
4.Khiya umshini womhlangano oyisisekelo ingcindezi encane yokuvala ingcindezi / ukhiye womnyango / ukhiye wokuqalisaIzixhobo ezihlobene: umshini wokuhambisa we-fiber optic / umshini wokunamathisela wedeskithophu
hose clamping umshini, non nokwelukiweyo imaski ukwenza umshini, non nokwelukiweyo ubuso imaski ukwenza umshini, umshini wesifihli sobuso, imaski yokuhlinzwa okwenza umshini, kuhlinzwa ubuso imaski ukwenza umshini,